Share Your Feeling....: 2011
မနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာပြီးစကားပြောတယ်
He: Can you help me?
He : Looking foragirl who wanna sleep with me at MBS for one night?
ပထမတော့ နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်.. ဒီကောင်ဘာလဲပေါ့... ဒါနဲ့ကြောင်တောင်တောင် လုပ်ပြလိုက်တော့ သူတော်တော်စိတ်လေသွားတယ်.... နောက်တော့ သူကဘဲပြန်ရှင်းရတယ်.. မနက်ဖြန်မှ ဖူးရင် နင်တို့တွေ သိပ်လန့်မှာ မဟုတ်လို့ ဒီနေ့ကြိုဖူးလိုက်တာတဲ့ နင်ကလည်း ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဆိုပြီး စိတ်လေလေနဲ့ ပြောသွားတယ်... အေပရယ်ဖူးပြန်လုပ်တဲ့သူကို ပြန်ဖူးပေးလိုက်တာ...
ဒါနဲ့ ဘယ်သူကို အရှုးလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာ ကံဆိုးသူကတော့ ကျွန်မရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူတစ်ယောက်ပေါ့.... ဘယ်လိုစရရင်ကောင်းမလဲလို့ လှည့်ပတ်စဉ်းစားတယ်။ အရူးလုပ်တယ်ဆိုကတည်းက အဲဒီလူကို ထိသွားအောင်လုပ်မှရမယ်ဆိုပြီး သေချာစဉ်းစားပြီးတာနဲ့ သူဂျီတော့မှာ ပြောထားလိုက်တယ်။ မနက်အိပ်ရာလည်းနိုးကတည်းက သူစိတ်ဆိုးနေလောက်ပြီးဆိုတာ သိတာနဲ့ သူကိုစကားပြောချင်လို့ အားရင်ပြန်ခေါ်ပါလို့ ပြောလိုက်တော့ သူစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပြန်ခေါ်ပါတယ်... သူအဲသံကြားတာနဲ့ တော်တော်စိတ်ဆိုးနေပြီးဆိုတာသိလိုက်တယ် Happy April Fool Day... ဆိုပြီး သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ ဒါနောက်စရာလားဆိုးပြီး စိတ်တွေဆိုးနေပါတယ်။ အခုအတန်ထဲမှာ စာသင်နေတယ်မအားဘူးဆိုပြီး ပြောသွားတယ်။ စိတ်ဆိုးပြေအောင် တော်တော်လေးချော့လိုက်ရတယ်။ အေပရယ်ဖူးလုပ်တာ အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့။
ဖေ့ဘွတ်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာပြောတယ် "အဲ့လို လူမျိုးဒွေပေါ့ ဟွန့် မုန်းဒယ်..."တဲ့ အရူလုပ်ခံလိုက်ရပြီလားလို့ မေးတော့ "ဒါပေါ့ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ (April Fool Day) ဆို တာ သတိထားနေရင်းနဲ့ ခံလိုက်ရတယ်" တဲ့... ဒါပေမဲ့ သူပျော်ပါတယ်တဲ့လေ....
နောက်ထပ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ "ယနေ့.. တနေ့ လုံးအတွက် .. အရေးကြီးသော မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုမှ .. မည်သူပြောပြော .. ယုံကြည်လိမ့်မည် .. မဟုတ်ပါကြောင်း .." ဆိုပြီး ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်လို့ ကြိုတင်သတင်းပေးထားတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကလည်း "သူငယ်ချင်းများ facebook ထဲဝင်ရင်လေး သူ့ကိုပြောလိုက်စမ်းပါ ဖေ့ဘွတ် ဆိုတာ ရူးကြောင်ကြောင် ဂေါက်တောက်တောက် ပေါတောတော တွေကျက်စားရာ နေရာကြီးပေါ့ ။ April fool :P" ဆိုပြီး ရေးထားလေရဲ့....
ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လိုစရမလဲလို့ စဉ်းစားနေရင်း ကိုယ့်ကို အေပရယ်ဖူးလုပ်တဲ့လင့်လေး မေးထဲကို ရောက်လာတယ်...http://www.winesu.tk/ ဆိုတဲ့လင့်လေးကို သူငယ်ချင်းတွေဆီကို ပို့ပေးလိုက်တယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ဘူးခံငြင်းကြတယ်.. လုံးဝမကြည့်ဘူးတဲ့... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ အငိုက်မိသွားတယ်။ ဝိုင်းစုအကြောင်းထင်နေလို့တဲ့... နင်ငါ့ကို အရူးလုပ်နိုင်သွားပြီလို့ လာပြောသွားတယ်။
ဘယ်သူစပြီး ထွင်ခဲ့မှန်းမသိတဲ့ သူတပါကို အရူးလုပ်တဲ့နေတစ်နေ့ပါ...ဝိကီကတော့ ဒီလိုဆိုတယ်။ အေပရယ် ၁ရက်နေ့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကျင်းပတဲ့နေ့ပါ။ အများသူငါရုံးပိတ်ရက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ အားလုံးက ဟာသတွေမျိုးမျိုးလုပ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုကျင်ပတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ.. သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေ အိပ်နီးနားချင်းတွေ ကိုယ်ခင်ရာမင်ရာလူတွေကို ပျော်ရွင်စရာ ဟာသလေးတွေ၊ နောက်ပြောင်လိမ် လည်မှုတွေ၊ လက်တွေကျတဲ့ ဟာသလေးတွေကို စနောက်ကျရင်း ကျင်းပကြပါတယ်။
နယူးဇီလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ အင်္ဂလန်၊ သြော်စတေီလျ၊ တောင်အာဖရိက တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ နေ့လည်ခင်းမတိုင်မီမှာ စနောက်ကြပြီး နေ့လည်ခင်းကျော်သွားပြီးအချိန်မှာ စနောက်ကျတဲ့သူတွေကိုတော့ အေပရယ်အရူးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ရုရှား၊ နယ်သာလန်၊ဂျာမနီ၊ ဘရာဇီး၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကားနိုင်ငံတွေကတော့ တနေ့လုံးစကြနောက်ကြပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်သဘောနဲ့ စကြနောက်ကြတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ပါ။ အရူးလုပ်တဲ့သူရော.. အရူးလုပ်ခံရတဲ့သူရော ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖြစ်ပါစေ...
ဂူဂယ်ကလည်း http://mail.google.com/mail/help/motion.html ဒါလေးနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွဲပါတယ်...
ရေးသားချိန် 4/01/2011 03:36:00 pm
စာမရေးဖြစ်တာလဲကြာပြီ... တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာတွေမှန်းမသိတာတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်ရင်း အချိန်တွေက ကုန်လွန်သွားတယ်။ စာမရေးတော့ဘူးလားလို့ တဖွဖွမေးနေတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းလေးအတွက် ဒီပို့လေးကိုရေးလိုက်ပါတယ်။
လူမှာအဝတ် တောင်းမှာအကွပ် ဆိုတဲ့အတိုင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ သူ့ရဲ့အပြုအမူဟန်ပန်ကို ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ပန်အမူအယာကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောထားပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအနေနေ့ပြောရရင် ကိုယ်သွားမဲ့နေရာ အခန်းအနားပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်ဖတ်အောင် ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့ဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပုံစံ၊ အတတ်ပညာရှင်ပုံစံ၊ ထသွားထလာအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံ စသဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ စမတ်ကျနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်ဟာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အံကိုက်ဖြစ်နေဖို့က အရေးကြီတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။ ကိုယ်ဝတ်နေကြဆိုဒ်ထက် နှစ်စလောက်သေးတဲ့(သို့)နှစ်စလောက်ကြီးတဲ့ အဝတ်တစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံကို စိတ်ထဲမှာ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လောက်ကို့ရို့ကားယားနိုင်မလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ သေသေသပ်သပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့အသွင်အပြင် စိတ်နေသဘောထားကို ဖော်ပြရာမှာ တစိတ်တဒေသပါဝင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုနဲ့အတူ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ဖို့ကလည်း နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။
အရောင်များရွေးချယ်တတ်ခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ပန်အမူအယာကို ပိုပြီးအသက်ဝင်အောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ပုံစံတကျနဲ့ ခန်းနားမှုရှိတယ်၊ ခေတ်ဆန်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အရောင်လို့ပြောချင်တယ်။
ကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုရစေတယ်။ ရိုးရှင်းမှုနဲ့အတူ သဘာဝကျကျလှပစေနိုင်တယ်။
အရောင်တွေအားလုံးထဲမှ အကောင်းဆုံးအရောင်လို့ပြောရမလားမသိဘူး။ တခြားဘယ်အရောင်နဲ့မဆို လိုက်ဖတ်မှုရှိတယ်။ ကြည်လင်ရှင်းသန့််မှုနဲ့အတူ ဖြူစင်အေးမြမှုသဘောဆောင်တယ်။
လိမ္မော်ရောင်တောက်တောက် အစိမ်းရောင်တောက်တောက် စသဖြင့်အရောင်တောက်များဟာ နေရာတိုင်းအတွက် မသင့်လျှော်တာကြောင့် အမြဲဝတ်ဖုိ့ကောင်းတဲ့အရောင်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
နက်ပြာ၊ မီးခိုးရင့်ရင်၊ မဟော်ဂနီ၊ အစိမ်းရင့်ရင်၊ ခရမ်းရင့်ရင့် စသဖြင့်အရောင်ရင့်များဟာ ပိန်သွားတယ်လို့ထင်ရအောင် မျက်လှည့်ပြနိုင်တဲ့ အရောင်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဝါနုနု၊ အစိမ်းဖျော့ဖျော့၊ အပြာရောင်လွင်လွင် စသဖြင့်အရောင်ဖျော့များကတော့ လူကိုပိုပြီး ကြီးသယောင်ယောင်ရှိစေတာကြောင့် သတိထားပြီးဝတ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
အရောင်တွေကို တွဲဖတ်ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ လိုက်ဖတ်မှုရှိမရှိကို အရင်သတိပြုရပါမယ်။ အနက်ရောင်လေး ထည့်ပြီဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် သံမာဖျတ်လတ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်စေတယ်။ အဖြူရောင်လေးနဲ့တွဲဖတ် ဝတ်ဆင်လိုက်ရင်လည်း နုညံ့ညင်သာမှုပုံစံလေးပေါက်နေမှာပါ။ အညိုရောင်တွေတွဲဖတ်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် နွေးထွေးမှုနဲ့အတူ ဖော်ရွေမှုပုံစံလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အရောင်ရင့်ရင့်နဲ့ အရောင်နုနုကိုအတူတကွ တွဲဖတ်ဝတ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အချိုးကျကျနဲ့ လှပနိုင်မှာပါ။ သတိထားရမဲ့အချက်ကတော့ အရောင်သုံးရောင်ထက်မပိုဘဲ ဝတ်ဆင်သင့်တယ်။
ဆံပင်ပုံစံကလည်း လူတစ်ယောက်ကိုဘဲ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားအောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်။ အရမ်းတိုလွန်း(သို့)အရမ်းရှည်လွန်းရင်လည်း မကောင်းပြန်ဘူး။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ရွေးချယ်တတ်မှသာ ပိုကြည့်ကောင်းပြီး ရှိရင်စွဲအသက်ထက် ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးရမှာပါ။ ဆံပင်အရောင်ဆိုးရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆံပင်ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံကိုယူပြီး ဆိုးတာပိုကောင်းတယ်။ အရမ်းတောက်ပလွန်းတဲ့အရောင်တွေ(ဥပမာ အစိမ်း၊အဝါ၊အဖြူ) ကိုလည်းရှောင်သင့်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုအရိုအသေတန်တဲ့ပုံစံမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ ဆံပင်အရောင်ကို အမြဲအပြောင်းအလဲလေး လုပ်သင်တယ်။ အပြောင်းအလဲ အသစ်အဆန်းပုံစံကြောင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုပါ ရနိုင်သေးတယ်။ ဆံပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ပုံစံ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုပါ လိုက်ဖတ်အောင် ပြောင်းလဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
မျက်နှာကိုဘာမှမလိမ်းဘဲ ရုံးတက်ဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့ သူများတွေ ကိုယ့်ကို လေးစားမှုရှိဖို့အတွက် အနည်းငယ်တော့ ပြင်ဆင်ချယ်သဖို့လိုလိမ့်မယ်။ မျက်ခုံးမွေးကို သေသေသပ်သပ်ဆွဲထားခြင်းဖြင့် ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုပြီးငယ်ရွယ်သွားသလို သစ်လွင်လန်းဆန်းနေမှာပါ။ မျက်တောင်ကော့ဆေးသုံးခြင်းဖြင့် မူရင်မျက်တောင်မွေးထက် ပိုရှည်ထွက်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးအရောင်ချယ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အဝတ်အစားနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိမှသာ ပိုကြည့်ကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးဖြစ်လာမှာလေ။ မိတ်ကလိမ်းချယ်နည်းကလည်း အနုပညာတစ်မျိုးမို့ ကိုယ့်ချယ်တတ်ရင် ချယ်တတ်သလို လှပလာမှာပါ။ သွားမဲ့နေရာဒေသကိုကြည့်ပြီး ချယ်သဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မနက်ခင်းရုံးသွားမှာကို Smokey eyes လိုချယ်သွားရင်တော့ ရုံးရောက်တာနဲ့ ဘာတွေဖြစ်လာလဲလို့ မေးခံရနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ အရမ်းထူပြစ်ပြစ်ကြီးမလိမ်းမိအောင် သတိထားရမယ်။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုတဲ့အခါ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားနဲ့ လိုက်ဖတ်တဲ့အရောင်ကို ဆိုးရမယ်။ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားက ခပ်ညိုညိုဆိုရင် အရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတွေ ဆိုးတဲ့အခါ သိပ်ပြီးလှပနိုင်မှာဟုတ်ဘူး။ နှုတ်ခမ်းနီအရည်ကတော့ သင့်ကိုအဲ့သြလောက်အောင် လှသွားစေလိမ့်မယ်။ နှုတ်ခမ်းနီအရည် ဆိုးတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်း အလည်တည့်တည့်မှာသာဆိုပြီး ဘေးဘက်တွေကို ဆိုးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါမှသာ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ လှပနေမှာပါ။
အားလုံးပြင်ဆင်လို့အပြီးမှာ ဖိနပ်ကိုလည်း လိုက်ဖက်အောင်ရွေးချယ်ရပါမယ်။ ညစ်ပတ်ပေရေ နေတဲ့ဖိနပ်ကိုစီးပြီး ဘယ်တော့မှ အပြင်မထွက်ပါနဲ့။ ညှပ်ဖိနပ်အပါးများဟာ အိမ်နေရင်းစီးဖို့၊ ကမ်းခြေသွားတဲ့အခါမှ စီးဖို့လောက်သာ သင့်တော်ပါတယ်။ ရှုးဖိနပ်တွေ စီးတာကြာပြီနောက် အနည်းငယ်စုတ်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ သက်တောင့်သက်သာရှိပါစေ ဆက်ပြီးစီးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ အရမ်းမြင့်လွန်းတဲ့ ဖိနပ်တွေဟာ ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းကို တွန်းအားပေးသလို တခြားခြေထောက်ပြသာနာတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အမြဲမစီးသင့်ပါဘူး။ ခါနာခြင်းဆိုတဲ့ အပိုဆုကိုလည်း ရနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
အားလုံးပြင်ဆင်ပြီနောက်မှာ အိပ်ပြင်ကိုမထွက်ခင် မှန်ထဲမှာ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကာ ဇစ်တွေ၊ကြယ်သီးတွေကို စစ်ဆေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေ တပါတည်း ထည့်ယူသွားလိုက်ပါ။
Ref: Polish Your Personal Branding
ရေးသားချိန် 3/04/2011 05:48:00 pm
ရေးသားချိန် 2/27/2011 09:46:00 pm
စာမရေးဖြစ်တာလဲကြာပြီ...ယူနီနဲ့ ဇော်ဂျီကြားမှာလည်း တဝဲလည်လည်။ အကြောင်းအရာကလည်း စဉ်းစားလို့မရတာနဲ့ ရှိနေတာလေးကိုတင်လိုက်တယ်။ အရင်က ဒိုင်ယာရီအဟောင်းလေးထဲက စာသားတွေပါ... ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာတွေပါသလို ကြိုက်လွန်းလို့ ပြန်ကူးထားတဲ့ စာသားလေးတွေလည်းပါတယ်။
"အခက်အခဲဆိုတာ ဥာဏ်နုံတဲ့သူအတွက် ဘဝတစ်ခုလုံး ကျိုးပျက်သွားပေမဲ့ အသိဥာဏ်ရှိသူတစ်ယောက်အတွက် ဘဝကြီးတစ်ခုလုံး တိုးတက်သွားနိုင်တယ် "
"လူ့ဘဝမှာ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထား၊ လေးနက်မှန်ကန်တဲ့ အသိဥာဏ်ရှိမှသာ လူဖြစ်ရကြိုးနပ်တယ်။ အလေးနက်ဆုံး အသိဥာဏ်ကို ဘဝအတွေ့အကြုံထဲကပဲ ရနိုင်တယ် "
"ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလျှင် ကြီးမားသော အကျိုးရလဒ်ကို ဖြစ်စေသည်။ သာမန်စဉ်းစားလျှင် သာမန်အကျိုးရလဒ်သာ ရရှိနိုင်သည်"
"သူများအပေါ်ကောင်းဖို့ အမြဲကြိုးစားပါ။ သူများမကောင်းခဲ့ရင်လည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ "
"ကြေကွဲမှု ပျက်စီးမှု ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အတူထွက်ပေါ်လာတဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကို လွယ်လွယ်နဲ့ မသုံးမိအောင် သတိထားပါ"
"မိမိကိုယ်ကို ထိန်ချုပ်သောအလေ့အကျင့် မွေးမြူပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုများ၊ လက်တလောဆန္ဒများ၏ ကျေးကျွန်အဖြစ်မခံပါနှင့်။ စိတ်ရှည်ဇွဲရှိသူ၊ ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းကို အောင်မြင်စွာ လိုက်နာတတ်အောင် ကြိုးစားပါ "
"ရည်ရွယ်ချက်ကို မြင့်မြင့်ထားပါ။ ပန်တိုင်ကိုရွေးပါ။ ပန်တိုင်ကို ရောက်ရန်အတွက် နည်းလမ်းရှိသရွေ့ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပါ"
"အများသူတွေအပေါ် အမြဲတမ်းစေတနာထားနိုင်ရင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလိမ့်မယ်"
"ဘဝဆိုတာ နာကျင်စရာလဲမဟုတ်၊ ပျော်ရွှင်စရာလဲမဟုတ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဘဝဆိုတာ လေးနက်လှတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ သတိနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ စွန့်လွတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ် "
"တက်လျှင်မြင့်၏၊ ဆင်းလျှင်နိမ့်၏၊ သွားလျှင်ရောက်၏၊ ထူလျှင် ထ၏၊ ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ ဟူသောထုံးကို နှလုံးမူရမည် "
"ကြီးမားတဲ့ ရည်ရွယ်ခက်တစ်ခုအတွက် သေးငယ်တဲ့ နှလုံးသားခံစားချက်ကို ဥပက္ခာပြုနိုင်ရမယ် "
"ကိုယ့်ဘဝ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ့်အပြုအမူပေါ်မှာ မူတည်တယ် "
"စိတ်ရှည်ဇွဲသန်ခြင်းနှင့် ဝိရိယစိုက်ထုတ်ခြင်းတို့သည် ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး အရင်းအနှီးများဖြစ်သည် "
"မှန်ကန်စွာ ချစ်တတ်သောသူတစ်ယောက်အဖို့ အချစ်ဆိုတာ လူသိရှင်ကြားဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်ပါ၊ အဝေးကြီးကနေ လူမသိသူမသိ တိတ်တိတ်ကလေး ချစ်ရသောအချစ်သည် ရင်ထဲက သစ္စာတရားကို ပို၍ပို၍ ဂုဏ်ရှိစေပါသည် "
"မျှော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ခိုင်မာပါစေ "
"မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းဟာ ကျေှးဇူးဆပ်နည်းတစ်မျိုးဆိုတာ အမြဲသတိရပါ "
"လူတစ်ယောက်မှာ အရေးကြီးဆုံးက စိတ်ဓာတ်ပဲ။ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင် အတုယူတတ်ရမယ်။ မရင့်ကျက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့ ဥပက္ခာပြုနိုင်ရလိမ့်မယ် "
"ကတိတစ်ခုကို ဖြစ်နိုင်မှပေး၊ ပေးပြီးသားကတိတစ်ခုကိုတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ "
"အလေးအနက်တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တတ်သူတွေအဖို့တော့ နီးခြင်းဝေးခြင်းဟာ သစ္စာတရားကို မယိုင်နဲ့စေတတ်ပါဘူး။"
"ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို အမြဲအောင်မြင်ရမယ်၊ ရှုံးနိမ့်မှုမရှိစေရဟု အမြဲတွေးပါ "
"ဆိတ်ဆိတ်နေပါ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ တန်ဖိုးရှိသောစကားကိုဆိုပါ "
"ဘဝခရီးဟာ တစ်ပြေးညီတော့မဟုတ်ဘူး။ မကြာခဏ ကြမ်းတမ်းမယ်။ ချောမွေ့ဖြောင့်ဖြူးတဲ့အခါလည်း ရှိနိုင်တယ် "
"ကိုယ်ကကြိုက်လို့ ကောင်းတာထက် ကောင်းတာမို့လို့ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးကို ရနိုင်တာပေါ့ "
"အရာရာကို အောင်မြင်နိုင်ဖို့ မိမိရဲ့ အရာရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရမယ် "
"မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ရင်ထဲကအချစ်ကို သေသပ်စွာ သိမ်းဆည်းထားတတ်သလို ဘဝတစ်ခုကို အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် နေတတ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပါတယ် "
ရေးသားချိန် 1/16/2011 10:22:00 pm
ဒီနှစ် နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Marina Bay Count Down သွားမယ်လို့ စီစဉ်ထားတယ်။ ၃၁ရက်နေ့မနက်မှာဘဲ အမလိုခင်ရတဲ့သူတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့တူမလေးဆုံးသွားကြောင်း အကြောင်းကြားလာခဲ့တယ်။ ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကြောင့် တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ညနေ ၃:၄၅ မိနစ်မှာ မီးသဂြိုလ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ဘဲ နှစ်သစ်ကူးချိန် လျှောက်လည်မဲ့ အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ပြီ ညနေဘက် သုံးနာရီကျော်လောက်မှာ Taxi ငှားပြီ Mandai Crematorium & Columbarium Complex ကိုသွားခဲ့တယ်။ ဒီမှာရောက်နေတာ လေးနှစ်ပြည့်တော့မယ် တခါမှ အဲဒီကိုမသွားဖူးတော့ Taxi မောင်းတဲ့သူကိုဘဲ အားကိုးပြီး သွားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနေရာကိုလည်းရောက်ရော Taxi မောင်းတဲ့သူက ဘယ်နေရာမှာ ချပေးရမလဲဆိုတော့ ဘယ်ကိုသွားရမလဲမသိဘူးလို့ပြောတော့ မီးရှို့တဲ့နေရာကို သွားချင်တာလားလို့ဆိုတာနဲ့ အဲဒီနေရာကိုဘဲ ပို့ခိုင်းရတယ်။ မီး သင်္ဂြိုလ် တဲ့ နေရာတွေကလည်းအများကြီး ဆိုတော့ ဘယ်ဟောထဲမှာလဲဆိုတာ လှမ်းမေးပြီး အရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာဘဲ မီး သင်္ဂြိုလ်ဖို့အတွက် ရွေ့လျားစက်လေးနဲ့ စက်ထဲကိုထည့်ဖို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်နေတာကို တွေခဲ့ရတယ်။ စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ဘဲ ကြည့်နေရင်း သံဝေဂရမိတယ်။ အရိုးပြာယူဖို့နဲ့ မီး သင်္ဂြိုလ်စရိတ်အတွက် S$1200 ပေးခဲ့ရတယ်။ အရိုးပြာကိုတော့ နောက်နေ့မနက် ၁၀နာရီမှာလာယူဖို့ပြောလိုက်တယ်။
လိုက်ပို့တဲ့သူအချို့ကိုလည်း City Hall ထိပြန်ပို့ပေးကာ ကျန်တဲ့သူများကတော့ သူတို့အိမ်ကိုဘဲ ပြန်လာခဲ့ကြပြီး နောက်နေ့မနက် သက်ပျောက်ဆွမ်းကယ်လှူဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ကြရတယ်။ လူရင်းတွေလောက်သာ ခေါ်ထားတဲ့အတွက် လူတွေအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ညဘက် လိုအပ်တာများကို ပြင်ဆင်ရင်နဲ့ အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားခဲ့တယ်။ ၁၁နာရီလောက်ကတည်းက နှစ်သစ်ကူးအတွက် SMS တွေတဖွဲဖွဲ ဝင်လာနေရင်းနဲ့ ၁၂နာရီမထိုးခင်မှာဘဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုဖို့က စိတ်ကူးထဲမှာဘဲ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ ၁ရက်၊၁လ၊၂၀၁၁ မနက်ငါးနာရီလောက်မှာ အိပ်ရာထပြီး အာရုံဆွမ်းကပ်ဖို့အတွက် ဆက်လက် ပြင်ဆင်ကြရတယ်။ ခြောက်နာရီထိုးခါနီလောက်မှာ ဘုန်းဘုန်းတွေကြွလာပြီး သက်ပျောက်ဆွမ်းကပ်ကာ တရားနာယူခဲ့ကြပါတယ်။
နံနက်ဆယ်နာရီလောက်မှာ Mandai Crematorium ကိုသွားကာ အရိုးပြာကို ယူခဲ့ရတယ်။ အရိုးပြာအိုးကို သေဆုံးသူရဲ့ အသက်ထက်ငယ်သောသူကသာ ကိုင်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကြောင့် သူ့ညီမလေးကိုဘဲ ကိုင်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ အရိုးပြာကို ရေမျှောဖို့အတွက် တရုပ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ Changi Village Ferry Terminal ကိုရောက်ကာ မော်တော်ဘုတ်တစ်စီးပြီး ပင်လယ်ဘက်ကို ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ Pulau Ubin ကျွန်းအကျော်လောက်ရောက်တာနဲ့ မော်တော်ဘုတ်ကိုရပ်ကာ ဘုန်ကြီးက ခေါင်းလောင်းလေးတီးလို့ တရုပ်လို ရွတ်ဖတ်သရဇယ်မှုကို လုပ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ လှေပေါ်မှာပါလာတဲ့လူဆယ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ချင်းဆီ အရိုးပြာတွေကို ရေထဲ့သို့ပစ်ချစေပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အရိုးအိုးသယ်လာတဲ့ ညီမလေးကဘဲ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ အရိုးတွေကိုရေထဲသို့ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ တော်တော်လေး ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတဲ့နောက်မှာ မော်တော်ဘုတ်နဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး Changi Village Ferry Terminal ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ Ferry Terminal ရောက်တော့ အားလုံးကိုလက်ဆေးဖို့ ဘုန်းကြီးက သတိပေးတာကြောင့် လက်ဝင်ဆေးကာ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ လူတွေအားလုံးလည်း အနည်းငယ် ပင်ပန်းနေကြပြီလေ။ မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက်ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ မထင်မှတ်ဘဲ အသုဘပို့ပေးဖြစ်တဲ့ နှစ်သစ်ကူးပါ။ ၁ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားချိန် 1/01/2011 10:07:00 pm
ပျော်ပျော်နေတတ်တယ် .. သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ခင်မင်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ် .. ခင်ပြီဆိုရင်အဆုံးစွန်ထိ ခင်မင်တတ်ပြီး.. နာကျင်ပြီဆိုရင်လည်း လှည့်မကြည့်တတ်တော့ဘူး ..
For Thought (4)
ခံစားမှု ဝတ္ထုတို (1)
စာပန်းအိမ်မှ အမှတ်တရ နေ့ရက်များ
ပြင်ဦးလွင်မှာ အပေါများဆုံးအရာတွေက အဆောင်တွေလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။( ပြီးတော့ စိမ်းစိမ်းနဲ့ အကောင်တွေလည်းပေါတယ်) နာမည်ကြီးတဲ့ အဆောင်တွေကတော့ ...
ဖိနပ်ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အမြဲတမ်းလိုအပ်နေတဲ့ မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုပါ။ ဖိနပ်တွေကို ကြိုက်တတ်တဲ့ကျွန်မ ဖိနပ်တွေအများကြီးဝယ်တတ်တဲ့အကျင့်က...
မျှော်လင့်ချက် စိတ်ကူး အိပ်မက်
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အိပ်မက်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကလေးဘဝတုန်းကဆိုရင် ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်၊ စစ်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်၊ အဆိုတော်ဖြစ်ချင...
မနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာပြီးစကားပြောတယ် He: Can you help me? Me: What is that? He : Looking foragirl who wanna sleep with me at MBS fo...
...ဆီမီးရယ်ထိန် ၊ အိုင်မင်းရေကြည်က .. ၊ ...ကြာငါးမည် ငုံအာစွင့်တယ်.. ၊ ဖူးပွင့်ချိန်ခါ .. ။ ...အဿဝဏီ ယှဉ်ကာချဉ်းပါလို့ .. ၊ လင်းလာတဲ့ ငွေတ...
ဒီနေ့မနက် ပုံမှန်အချိန်အတိုင်း ရုံးရောက်တယ်။ ဂျီမေး(လ်)ဖွင့်တယ်၊ ဖေ့ဘုတ်ဖွင့်တယ်၊ ဖတ်စရာရှိတာတွေဖတ်တယ်။ နောက်ဆုံးမှ ရုံးကအီးမေး(လ်)ကိုဖွင့်တ...
အရောက်အများဆုံးနဲ့ သွားတဲ့အခေါက်တိုင်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအမျိုးမျိုးကြုံရတဲ့ နိုင်ငံက မလေးရှားနိုင်ငံဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီခဲ့တဲ့ရုံးပိတ်ရက်ကဘဲ မ...
စာမရေးဖြစ်တာလဲကြာပြီ... တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာတွေမှန်းမသိတာတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်ရင်း အချိန်တွေက ကုန်လွန်သွားတယ်။ စာမရေးတော့ဘူးလားလို့ တဖွဖွမေးနေတဲ့ ချစ်သ...
http://shwebeauty.com/မှ ညီမလေး တစ်ယောက်က သူတို့ဘလော့မှာ လာရေးဖို့ ဖိတ်ခေါ် တာကြောင့် ဒီပို့လေးကို အဲဒီမှာ ရေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဘလော့မှာ စုစုစ...
ဒီနှစ် နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Marina Bay Count Down သွားမယ်လို့ စီစဉ်ထားတယ်။ ၃၁ရက်နေ့မနက်မှာဘဲ အမလိုခင်ရတဲ့သူတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်...
Bookmark ထဲမှ Bloggerများ
Sayar Aung thin
မိုးစက်မှော် » နိုင်ငံခြားရောဂါ
The Magical Touch - Creme LX
For Poetic People
» သတ္တိကို မွေးယူခြင်း (စိတ်အားသတ္တိ)- ၁
Blackjack Free, AztecCasino, Counter code, Betsson Casino, MILLIONAIRECASINO